HomeEnglandGerrard Oo ilmaynaya :- Waligay Ima Soo Marin 90 Daqiiqo oo Ka Badan Kan Ciyaarta City
Kabtanka kooxda Liverpool ee Steven Gerrard ayaa si qiiro leh, isagoo ilmadu ka da’ayso cabiray dareenkiisa kadib guushii 3-2 da ahayd ee ay kaga talaabsadeen kooxda Manchester City gallabnimadii Maanta.
Gerrard ayaa si nasasho la’aan ah ugu dedaalayay inaany City abuurin fursado ay kula sinaato intii lagu jiray ciyaarta , waxaanu tilmaamay in 90 kii daqiiqo ee ciyaartu socotay ahayd, sagaashankii minute ee ugu dheeraa ee uu waligii ciyaaro.
Taageerayaasha iyo ciyaaryahanada Liverpool ayaa farxad darteed waalan gaadhay markii lagu dhuftay dhawaaqii ugu dambeeyey ee siidhiga gunaanadka ciyaarta, waa markan, goorta uu Gerrard oo ilmaynayaa isugu yeedhayo xidigaha kooxda dharcasta , kuna dhiirjnayo hadaladan …” Dhagaysta ! Ciyaartani wey dhamaatay- waxaynu u tagaynaa Norwich ciyaartan oo kale ah ama ka adag- waa inaan iskaashi iyo wadashaqayn ku qaabilnaa – Wadajir , wadajir !” ayuu ku yidhi ciyaaryahanadii madaxa is galliyey ee iskaashiga markanba sii muujinayay.
Isagoo ka sheekaynaya dareenkiisa, Gerrard wuxuu u sheegay warfidiyaha Sky Sports sidan:’Dareen farxadeed baan muquurtay. Waxaan u baahanahay inaan degenaan ku sii socono. Waxa na sugaya afar ciyaarood oo waaweyn.
‘Taas oo macno weyn noo samaynaysa. Wey naga daba keeneen goolashii aanu ku lahayn, waxaa aniga ila soo darsay cabsidii ugu darayd.
‘Guushani waa fariintii ugu cuslayd ee aanu in mudo ah dirno. Waxaanu muujinay inaanu awood badanahay.
‘Waxay ahaayeen 90 kii daqiiqo ee ugu dheeraa ee aan waligay ciyaaro. Waxaan ka baqay in nala barbareeyo saacadiina wey iga hor dhaqaaqi weyday, waxaaban u maleeyey in miridh tirisada saacadu ay dib dib u shaqaynayso!
Pedro: “Ma Sheegi Karo In Ay Ahayd Ciyaartaydii Ugu Dambaysay Ee Barça”
Muuqaaladii Debaal Degga :- Bayern Munich Damaashaadkii Waalida Ahaa Ee Maanta